Ejypta : Famakafakana ny vitan’ny Twitter eny an-kianja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2011 13:50 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, 繁體中文, 简体中文, Français, عربي, বাংলা, English
Raha toa ka misy ny sehatra iray nahatonga ny Revolisiona ejipsiana “ho fanokafana ny maso” eo amin'ny resaka valantserasera, dia tokony ho ny nahatonga ireo Ejypsiana an'arivony niditra ny tranokalan'ny siokantsera Twitter.
Avy amin'iray amin'ireo bilaogera sy mpitsiokantsera malaza ao Ejipta, Alaa Abd El Fattah [teny arabo] (@alaa) ny aingam-panahy amin'izany adihevitra izany mba hitondrana ny tsara indrindra amin'ireo tontolo roa ireo: Twitter sy ny kianjan'i Tahrir.
Tweet Nadwa no vokatr'izany, karazana seminera mitovy amin'ny famoriam-bahoaka, nofaritan'i Abd El Fattah tao amin'ny lahatsoratra bilaogy mitondra ny lohateny hoe “Ny mitovy no tafaraka”.
Anisan'ny mpandray anjara i Ibrahim Houdaiby, mpiaramiasa mpanoratra ao amin'ny Guardian no sady zafindohalik'i Hassan Houdaiby, Jeneraly Mpitantana faharoa an'ireo Mpirahalahy Miozolomana , tao koa ny mpanao gazety Abdel Moneim Mahmoud sy i Ahmed Samir, mpikambana taloha tao amin'ny Mpirahalahy Miozolomana ny voalohany raha toa ka mbola mpikambana mavitrika ao ilay faharoa hatramin'izao.
Marobe ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny mpandray anjara mikasika ny fivoriana tahaka an'i Hussein Adel Fahmy mpampiasa tweet izay nilaza hoe :
#tweetnadwa zava-baovao ary fisantarana tena tsara. Ny hevitro dia tsy tokony hanohitra ny rafitra momba ny soram-piankohonana ny foto-kevitry ny islamika ao Ejypta.
Nidera ny fahaizan'i Abdel Fattah ho toy ny mpandrindra ny fivoriana i Dr Moustafa Hussein ary namoaka sarin'ny Nadwa.
Fandraisana anjara lehibe tamin'ny #tweetnadwa @alaa, hery lehibe ho an'ny vondrona izany http://twitpic.com/5arcqj
Ary ilay mpampiasa Tweet Mai Zeiny namehy fa :
#tweetnadwa fahombiazana lehibe, niverina ny aingam-panahy tahrir. Fahasamihafan'ny mpandray anjara, adihevitra mahafinaritra! Misaotra @alaa @manal sy ny rehetra
Abdel Fattah nanamafy fa mbola hisy ny fihodinana faharoa amin'ny adihevitra atao mitovy amin'ny Twitter :
Nahafinaritra ny #tweetnadwa misaotra ny mpiara-miasa rehetra, tsy manana aterineto aho amin'izao fotoana izao fa amin'ny manaraka miadihevitra